We.com.mm - Black Friday တွင် Ebay မှ airpods များကို တစ်ခုလျှင် ၉၉ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းချပေးခဲ့
ပြီးခဲ့တဲ့ BlackFriday sale တုန်းက Apple ရဲ့ Airpod တစ်စုံကို ၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ Ebay က ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ Apple Watch series3ကို ၂၉၉ ဒေါ်လာ နဲ့ Dyson V8 ဖုန်စုပ်စက်တွေကိုလည်း ၃၉၉ ဒေါ်လာ စတဲ့ဈေးတွေနဲ့ရောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။
Picture Credit - dailymail.co.uk
Airpods ရဲ့ မူရင်းဈေးက ပျမ်းမျှဆိုရင် ၂၄၉ ဒေါ်လာရှိတဲ့အတွက် ဒေါ်လာ ၁၅၀ လောက်ကို save လုပ်ပြီးရောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ Apple Watch series3ရဲ့ မူရင်းဈေးက ၄၀၉.၉၉ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထက်ဝက်လောက်လျှော့ပေးခဲ့တာဖြစ်သလို ဖုန်စုပ်စက်ဆိုရင်လည်း မူရင်းဈေး ၇၄၉.၉၉ ကနေ ၃၅၀ လျှော့ပြီး ၃၉၉.၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။
Picture Credit - medium.com ( Ray Tang )
ဒါ့အပြင် လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံ၊ ဒရုန်း၊ PS4 ဂိမ်းစက်၊ ဖိနပ် စတာတွေကိုလည်း မူရင်းဈေးထက် အများကြီးလျှော့ပြီးရောင်းချခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုလျှော့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူဖို့အတွက် eBay Plus Member ရယူထားဖို့လိုအပ်ပြီး Plus Member ကို subscribe လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၄၉.၉၉ ဒေါ်လာကျသင့်မှာပါ။ eBay Plus Member ကို subscribe လုပ်မယ့်သူတွေအတွက် ရက်သုံးဆယ်စာ အခမဲ့ subscription အစီအစဉ်လည်းရှိပြီး အဲဒီအစီအစဉ်မှာ အပေါ်က drone နဲ့ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံတွေဝယ်ယူခွင့်လည်း ပါပါတယ်။
Source - dailymail.co.uk ( https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7733189/eBay-launches-MEGA-sale-Apple-Airpods-selling-99.html?fbclid=IwAR1s7YqSxZekMOSI_mQPaivFZK4SjymqlktFEgxCSdyjFq01AkNArpMQANc )
( 13. 11. 2019 ) အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငလျင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( Update )
ဘတ်စ်ကားတစ်စီးထက်ကြီးပြီး ရုပ်ထွက် 16K ရှိတဲ့ တီဗွီကြီးကို Sony ထုတ်လုပ်
မကြာခင် ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပွဲစဉ် Live ထုတ်လွှင့်မှုများ ပြန်လည်စတင်မည်